Bible Mu Nsɛm Sɛnea Wogyee Akokoaa Mose Nkwa - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
HWƐ abofra ketewa a ɔresu, na okura awuraa no nsam no. Mose nen. Wunim nea awuraa fɛfɛ no yɛ? Ɔyɛ Misraim hene Farao babea ankasa.
Mose maame de ne ba no siei kosii sɛ odii asram abiɛsa, efisɛ wampɛ sɛ Misrifo no kum no. Nanso na onim sɛ ebia obi behu Mose, enti eyi na ɔyɛ de gyee no nkwa.
Ɔfaa kɛntɛn bi hyehyɛɛ no sɛnea ɛbɛyɛ a nsu renkɔ mu. Afei ɔde Mose toom, na ɔde kɛntɛn so sii wura atenten a ɛwɔ Asubɔnten Nil ho no mu. Wɔka kyerɛɛ Mose nuabea Miriam sɛ onnyina hɔ baabi na ɔnhwɛ nea ɛbɛba.
Ankyɛ na Farao babea no baa Asubɔnten Nil ho sɛ obeguare. Mpofirim ara ohuu kɛntɛn a ɛwɔ wura atenten no mu no. Ɔfrɛɛ ne mfenaa no biako sɛ: ‘Kɔfa saa kɛntɛn no brɛ me.’ Bere a ɔhene babea yi buee kɛntɛn no so no, na abofra fɛfɛ bɛn ara na ɔda mu! Na Mose resu, na ne ho yɛɛ ɔhene babea no mmɔbɔ. Wampɛ sɛ wokum no.
Afei Miriam pue bae. Wutumi hu no wɔ mfonini no mu. Miriam bisaa Farao babea no sɛ: ‘Menkɔfrɛ Israelfo mmea no bi na ɔnhwɛ abofra no mma wo anaa?’
Ɔhene babea no kae sɛ, ‘Yiw.’
Enti Miriam tuu mmirika kɔbɔɔ ne maame amanneɛ. Bere a Mose maame bae no, ɔhene babea no kae sɛ: ‘Fa abofra yi na hwɛ no ma me, na metua wo ka.’
Enti Mose maame hwɛɛ n’ankasa ne ba. Akyiri yi, bere a Mose nyinii kakra no, ɔde no kɔmaa Farao babea no, na ɔfaa no sɛ n’ankasa ba. Saa na ɛyɛe na Mose konyinii wɔ Farao fie.
Abofra ketewa bɛn na ɔwɔ mfonini no mu no, na hena nsam na okura no?
Dɛn na Mose maame yɛe a enti wɔankum Mose?
Abeawa ketewa a ɔwɔ mfonini no mu no yɛ hena, na dɛn na ɔyɛe?
Bere a Farao babea no huu abofra no, asɛm bɛn na Miriam kae?
Asɛm bɛn na ɔhene babea no ka kyerɛɛ Mose maame?
Kenkan Exodus 2:1-10.
Hokwan bɛn na Mose maame nyae a ɔde tetee ne ba no wɔ ne mmofraberem, na dɛn na awofo betumi asua afi mu nnɛ? (Ex. 2:9, 10; Deut. 6:6-9; Mmeb. 22:6; Efe. 6:4; 2 Tim. 3:15)